IHuawei ibhengeza ukubonwa kwayo kweSmartwatch GT ngaphandle kwe-Android Wear | I-Androidsis
UManuel Ramirez | | Huawei, SmartWatch
IHuawei Watch GT sesinye sezixhobo ezibhengeziweyo ngoku yinkampani yaseTshayina. Ismartwatch esitsha esime ngaphandle ngokungabinayo i-Android Wear kwaye silandela umkhondo oshiywe zezinye iimveliso ezinje ngeSamsung.
Le smartwatch intsha yeHuawei ime ngaphandle ibhetri yayo evumela ukuya kwiiveki ezi-2, kunye nesakhono sokufikelela kwiintsuku ezingama-30 ukuba senza ukusetyenziswa okuncinci. Kodwa ayisiyiyo kuphela yesi sizathu ukuba iHuawei Watch GT ime ngaphandle.
I-smartwatch evela kuhlobo lwe-Android ngaphandle kwe-Android Wear
Kubonakala ngathi i-G enkulu ishiywe ngaphandle komnye umdlali weqonga le-Android ukusebenzisa inguqulelo yayo elungiselelwe ukunxiba ibizwa ngokuba yi-Android Wear. Kwaye yile Huawei Watch GT intsha isebenzisa inguqulelo yayo ebizwa ngokuba yiLiteOS kwaye ibonakaliswa ngokunciphisa kakhulu ukusetyenziswa kwebhetri yefowuni.
Ngale nto engqondweni, sinokuqonda ngakumbi ukuba iHuawei uziqhayisile ngezo veki zimbini yobomi bebhetri kunye nokusetyenziswa okuphakathi. Kodwa ngaphandle kwebhetri, kuya kufuneka ubenewotshi efanelekileyo ene-1,39-intshi touch screen kwaye inamaqhosha ama-2 kwicala layo.
Esi sikrini sinjalo ikhuselwe ngumzimba wentsimbi iwotshi evelele uyilo lwayo kunye nokungabi yeyona inkulu esiyibonileyo kwezinye iimodeli zeHuawei efanayo.
Ikwanayo IGPS kunye neGalileo yendawo. Oko kwathethi, gcinani engqondweni ukuba ukuba ufuna ihlale iintsuku ezingama-30, kuya kufuneka ukhuphe i-GPS kunye nokukhubazeka. Iiveki ezi-2 zobomi bebhetri ekusetyenzisweni apho sibandakanya ukufundwa okuqhubekayo kwempembelelo kunye nemizuzu eli-19 ngeveki. Okokugqibela, iiyure ezingama-22 ukuba senza i-GPS kunye nokubetha okuqhubekayo.
IHuawei Watch GT yiwotshi efanelekileyo ekwayiyo ukuzinikezela kwimithambo yomzimba ngeendlela ezahlukeneyo zokubaleka, ukuhamba ngebhayisikile, ukuqubha, ukunyuka intaba nokuhamba. Njengomzekelo weXiaomi, iMi Band 3, uya kuba nakho ukubala iiyure zokulala.
El Ixabiso leHuawei le-GT kuhlobo lwayo lweMidlalo ifikelela kwi-euro ezingama-199. Kwaye inguqulelo yeklasikhi inyuka iye kwi-euro ezingama-249, kwiwatchwatch ephuma kwi-Android Wear kwaye elindele ukuba nobukho kwintengiso enkosi kobo bomi bebhetri.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » SmartWatch » IHuawei Watch GT yiwatchwatch entsha ngaphandle kwe-Android Wear
I-Huawei Mate 20 kunye ne-Mate 20 Pro: Isiphelo esitsha sikaHuawei